अझै तीन दिनसम्म नारायणी नदीमा बहाव बढ्ने, कहाँ–कहाँ छ जोखिम ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com अझै तीन दिनसम्म नारायणी नदीमा बहाव बढ्ने, कहाँ–कहाँ छ जोखिम ? - खबर प्रवाह
अझै तीन दिनसम्म नारायणी नदीमा बहाव बढ्ने, कहाँ–कहाँ छ जोखिम ?
काठमाडौं।आज (बिहीबार) देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव परेकाले देशभर आँशिकदेखि सामान्य बदली रही बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का केही स्थानहरुमा वर्षा भइरहेको छ ।
बिहीबार बिहानको मापनअनुसार कोशी, नारायणी र यसका सहायक नदीमा बाहाव बढ्दो क्रममा रहेको तर सबैमा बहाव सतर्कता तहभन्दा तल नै रहेको महाशाखाको भनाइ छ । कालीगण्डकीमा बहाव सतर्कता आसपास रहेको छ ।
कन्काई, कमला, बागमती, पश्चिम राप्ती, बबई र यसका केही सहयाक नदीमा भने बहाव घट्दो क्रममा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
आज नारायणी र यसका केहि सहायक नदीमा बहाव केहि बढ्ने तथा अन्य सबै प्रमुख र मझौला नदीमा बहाव केहि घटबढ हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ ।